नेकपा राहत वितरणको नाममा सस्तो राजनीतिक प्रचारबाजीमा ब्यस्त छ : दुर्लभ थापा — Bhaktapurpost.com
भक्तपुरपोस्ट संवाददाता भक्तपुर, १ बैशाख
भक्तपुर, १ बैशाख
(दुर्लभ थापा नेपाली काँग्रेसको भक्तपुर जिल्ला सभापति हुन् । देशमा २० दिन देखि जारी बन्दाबन्दी (लकडाउन) बाट भक्तपुरमा परेको प्रभाव र नेपाली काँग्रेसको क्रियाशीलताको विषयमा केन्द्रित रहेर भक्तपुर पोस्टका लागि संजीप शुभचिन्तकले उनीसंग गरेको टेलिफोन संवादको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।)
नयाँ वर्ष कसरी मनाइरहनुभएको छ ?
कोरोना भाइरसको बिश्वब्यापी महामारी रहेको र हाम्रो देशमा पनि लकडाउन भएकोले नयाँ वर्ष उत्साहजनक छैन । तथापी, घरमै रहेर परिवारसंग र साथीभाइसंग टेलिफोन र सामाजिक संजाल मार्फत शुभकामना आदानप्रदान गरेर नयाँ वर्ष मनाइरहेको छु । नयाँ वर्षको नाममा खर्च बढाउने भन्दा खर्च घटाउने समय हो यो । लकडाउनका कारण खाना खान नपाउने विपन्नहरुलाई आफ्नो गाँस काटेर खाना उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा फजुल खर्च नगर्न परिवार, साथीभाई र आम कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेको छु ।
नेपाली काँग्रेसले भक्तपुरमा राहत नै बाँडेन भन्ने छ नि ?
हेर्नुस्, अहिले राहतको नाममा फोटो खिचाएर आफ्नो प्रचार गर्ने मात्र काम भएको छ । यो समय निस्वार्थ सहयोग गर्ने समय हो । सहयोगको नाममा राजनीति र प्रचारवाजी गर्ने समय होइन । अहिले तपाइँ हेर्नुहुन्छ भने सतारुढ़ दल राहत वितरणको नाममा सस्तो राजनीतिक प्रचारबाजीमा ब्यस्त छ । यकातिर, उ नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई राहत सामाग्री बाढ्न बन्देज गर्दैछ जुनकुरा पूर्व मन्त्रीहरुलाई नै सहयोग गर्नबाट रोकेको सार्वजनिक भैसकेको छ भने अर्कोतिर नेपाली काँग्रेस यस्तो दुखको बेलामा पनि घरमा सुतेर बसेको प्रोपोगान्डा फैलाइरहेको छ । यो अति नै तुच्छ राजनीतिक खेल भैराखेको देखिन्छ ।
जहाँ सम्म भक्तपुर काँग्रेसको कुरा छ, हामीले आफ्नो हैसियत अनुसार सहयोग गरिरहेका छौं । म आफू पनि आफ्नो समुदायमा रहेका बिपन्न परिवारलाई सहयोग गरिरहेको छु र प्रत्येक क्रियाशील सदस्यले आफ्नो घर वरपर रहेका विपन्नको लागि खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न मैले निर्देशन गरेको छु । हाम्रा तरुण दल , नेवि संघ लगायतका युवा साथीहरुले पनि सचेत ढंगमा आवाजविहीनहरुको आवाज बनेर विपन्न परिवारको चुल्हो बाल्ने जोहो गरिरहनु भएको छ ।
भक्तपुरमा बिपन्न परिवार भोकै रहनुपर्ने अवस्था छ कि छैन ?
स्थानीय तहका वडास्तरमा रहेका नेताहरुले सबैको हैसियत बुझेका हुन्छन तर यहाँ हामीले समाचारमा पढ्यौ कि हुनेखानेले पनि राहत लगे भनेर नेकपाबाटै निर्वाचित वडाध्यक्षहरु रोइकराइ गरिरहेका थिए । राहत वितरणको मापदण्ड बनाउन नसक्ने त हाम्रा वडाध्यक्षहरु छन् । यस्तोमा सरकारी राहत लोभीपापीले खाइरहेका र पाउनुपर्ने जनताले नपाइरहेका हुन सक्छन । कतिपय ठाउँमा ३ किलो चामल राहत भनेर दिएको पनि देखियो । त्यो राहतले कति दिन खाने हो ? यसर्थ, राहत वितरणमा संबेदनशील नहुने हो भने बिपन्न परिवार भोकै रहनुपर्ने स्थिति छ । यद्यपी हामीले आफ्नो एक छाक काटेर अर्को छाक खान नपाउनेलाई खुवाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएकाले हामी त्यो अवस्था आउँन दिंदैनौं । हामी कम्युनिष्ट जस्तो गरीबको नाउँमा राजनीति गरी गरीबलाई नै लात हान्ने कठोर ह्दयका होइनौं । हामी धर्ममा विस्वास गर्छौं । बिहान मन्दिरमा अक्षता चढाउने सस्कार बाट हामी हुर्किएका छौं । हामीलाई थाहाँ छ भोकालाई भोजन दिनु जत्ति पुण्य कर्म अरु हुन सक्दैन । त्यसैले नेपाली काँग्रेसले कसैलाई भोको हुन दिंदैन ।
भक्तपुरमा संघ र प्रदेशका सांसद छन्, ४ वटा स्थानीय सरकार पनि छ । यिनीहरुको कामलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको आखाँले कसरी मुल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
संघ र प्रदेशका सांसदहरु, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु र वडाप्रतिनिधिहरु कता लुकेका छन्, जनताले देखेका छैनन् । फोटो खिचाउने र घरमा भागिहाल्ने प्रवृत्ति छ । जनताको करले किनेको राहत आफ्नै घरबाट दिएको झैँ अभिमान देखाउँदै फोटो खिच्ने बाहेक उनीहरुको काम देखिएको छैन । जनता घरमा लकडाउनमा छन् । यतिबेला उनीहरुलाई सरकारको सबभन्दा धेरै खाँचो छ तर कमिसन खान पल्केकाहरु जनताको घरमा जाने साहस देखाउन सकेका छैनन् । रोगविरुद्ध लड्न योजनाबद्ध योजनाहरु बनाएका छैनन् । ४ मुठ्ठा साग बेच्न किसानहरु बाटोमा जोखिम मोलेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय सरकारले किसानको साग किनिदिएर ब्यवस्थित बिक्रीको व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन । यद्यपी समाचार बनाउन एकदुइ दिन गरी टोपलेका थिए । बजारमा भिडभाड कायम छ, स्थानीय सरकारले घरघरमा सामान पुर्याउने सेवा दिन सक्थ्यो तर, गरेको छैन । मलाई त यस्तो लाग्छ, हामीलाई भगवान पशुपतिनाथले बचाइरहेका छन्, सरकारले लकडाउन भित्र आवश्यक अन्य सुरक्षा सावधानी अपनाउन सकेको छैन ।
जिल्लामा लकडाउन प्रभावकारीता कस्तो देखिएको छ ? स्थानीय प्रशासनकाे कस्ताे मूल्यांकन गर्नु भएकाे छ ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लकडाउनलाई कडाइका साथ् लागू गराएको भएपनि प्रहरीको आखाँ छलेर बाहिर निस्कँदा आफूलाई बहादुर ठान्ने मानिसहरुका कारण केहि समस्या छ । शहरी शिक्षित भनिने भक्तपुरमा केहि मानिसहरु कोरोना जस्तो भयावह रोग प्रति लापरवाह देखिनु राम्रो कुरा होइन । तरकारी किन्न दशैमा टीका लाउन हिँडे जसरी पूरै परिवार हिडेका देखिन्छन । प्रहरी प्रशासन जोखिम मोलेरै सडकमा हाम्रो सुरक्षाको लागि कराइरहेको छ । सरकारले घरमै बस भनेको छ तर हावा खान भन्दै केहि मानिसहरु समूह बनेर टहलिरहेका छन् । यसमा प्रशासनको असक्षमताको कुरा भन्दा मानिसहरुको मूर्खता हावी देखिएको छ ।
भक्तपुरमा कालोबजारी भएको छ कि छैन ?
कालोबजारी गर्न त सरकारले नै सिकाएको छ नि । हामीले देख्यौं, स्वास्थ्य सामाग्री खरीदका नाउँमा करोडौं कुम्ल्याउन सरकारले नै कालोबजारी गर्यो । स्वास्थ्य विभागका डिजीले यस्तो महामारीमा सामान महँगो हुन्छ भनेर आफ्नो खरीदको बचाव गरे । यस्तो अबस्थामा अब किसानले १० रुपियाँको साग २० मा बेच्दा कालोबजारी भन्ने कि नभन्ने ? जो अगुवा उही कालोबजारी भएको अवस्थामा बजारमा कालोबजारी नियन्त्रण चुनौतिपूर्ण कुरा भएको छ । यद्यपी, नेपाली काँग्रेस कालोबजारी बिरुद्ध कठोर छ र कालोबजारी हुन नदिन प्रतिवद्ध छ ।
अन्त्यमा तपाईको संदेश के छ
कोरोना महामारीबाट शक्ति राष्ट्रहरु नै बिचलित बनेका छन् । यस्तोमा, नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । लकडाउनको पूर्ण पालना गरी घरमै सुरक्षित किसिमले बस्न र बेला बेलामा हात धोइरहन अनुरोध गर्दछु । अत्यावस्यक काममा बाहिर निस्कदा घरको निरोगी व्यक्ति, रोगप्रतिरोधी क्षमता भएको एक व्यक्ति मात्र बाहिर निस्कन समेत अनुरोध छ । सरकारका प्रतिनिधि र जनताका प्रतिनिधिलाई मूल्यांकन गर्ने अवसर कोरोनाले जुटाइदिएको छ । उनीहरुको मूल्यांकन गरेर राख्नुहोला । अन्त्यमा मेरो व्यक्तिगत र जिल्ला पार्टीको तर्फबाट पनि तपाइँ सम्पूर्ण महानुभावहरुमा नयाँ वर्ष २०७७ को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । हामी घरमै बसि सुरक्षित रहौैँ । आफू पनि बचौँ, अरुलाई पनि बचाऔँ ।